Wiricheya Zvikamu - Kukwidza Legrests (ELR) | Karmanhealthcare.com
Categories: Mazuva ese Aids, Wiricheya Zvishongedzo, Wiricheya Zvishongedzo
EL-S115 (Kukwidziridza Legrest yeS-100 dzakateerana ergonomic wiricheya)
Zvinoumbwa netsoka & padded mhuru padhi inosanganisirwa mukutenga kwako kwekusimudzira legrest!
Urefu hunogadziriswa tsoka
Kutsanangura hinges kubvumira kushoma kunetseka pamajoini kana uchisimudza makumbo.
Anti-microbial pende inobvumira nyore nyore kuchenesa nguva dzese.
Kukwidziridza Legrest yeErgonomic Models inongowanikwa muDiamondi Nhema kupera.
EL-S305 (Kukwidziridza Legrest yeS-300 dzakateerana ergonomic wiricheya)
Lightweight aluminium, yakakwira unhu inosimudza legrest peya yeS-300 akateedzana.
Yakakwirira simba inoumbwa netsoka dzakatsetseka kukwirira kuchinjika.
Kureba kunochinja tsoka, ine flip kumusoro dhizaini uye fambisa kure musangano.
Diamond Nhema pedza
Mutambo wepasirese Kukwidza legrest, inokodzera marandi mazhinji mavhiripu.
Urefu hunogadziriswa hwatsoka, kukurumidza kuburitsa pini peta maitiro.
Chimiro chemuvara: Nhema
1.5 inch gap, inokodzera yakawanda INV maitiro mavhiripu.
Padded Mhuru padhi inosanganisirwa nyaradzo uye kumanikidzwa kuyamurwaEL18BB-EJ-DY
3 inch gap, inokodzera zvakanyanya E & J maitiro mavhiripu.
Padded Mhuru padhi inosanganisirwa nyaradzo uye kumanikidzwa zororo.